HTC EVO 4G - 3G ခေတ်ကုန်ပြီလား
3G ခေတ်ကုန်ပြီး 4G ခေတ်ရောက်လာပြီ။ Mobile နည်းပညာတွေကတော့ ကြောက်ဖို့ကောင်းလာပြီ။ နောက်ပိုင်း ကွန်ပျူတာ ဝယ်စာရာမလိုတော့ဘဲ All in One ဖြစ်လာတော့မယ်။ iPad လိုဟာမျိုးတွေပေါ့။ HTC ကတော့ Google နဲ့ပေါင်းပြီး iPhone ကို လိုက်ပြိုင်နေတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ iphone ကတော့ ကျမသွားဘဲ ပိုပြီး တက်လာတာတွေ့နေရတယ်။ နောက်ထပ် iphone ကလည်း 3GS ပြီးတော့ 4GS ထွက်လာမည့်ပုံရှိတယ်။ EVO က iphone ထက်ကောင်းမလားဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပဲ။
မြန်မာပြည်တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကြီး နှင့် မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် ဒီပို့စ်မှာ ပထမဦးဆုံး comment ပေးတဲ့သူ ၃ ဦးကို ဧပြီ လ ၃၁ ရက်နေ့ကျရင် HTC EVO 4G တစ်လုံးစီ လက်ဆောင်ပေးသွားပါမယ်။ ပို့ရမည့် လိပ်စာအသေးစိတ်ကို comment မှာ တခါတည်း ရေးထားခဲ့ပေးပါ။
HTC HTC EVO 4G
Labels: HTC HTC EVO 4G
အိန္ဒိယရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများရဲ့ ၂ဝ၁ဝ...
Sharing: ယနေ့ NLD အစည်းအဝေးအပြီး နောက်ဆုံးသတင်း
Sharing: ရွက်နုတွေ ဝေစေချင်လို့ (အောင်သင်း)
Sharing: မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နဲ့ ၂၀၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ
Sharing: Invitation for Resistance Day Demonstrati...
Invitation for Fundraising Event by Karen Communit...
Event: Burma Day of Prayer 2010
Event: Invitation for Ko Mya Aye's Birthday
Oxford International Women's Festival အမှတ်တရ
မန္တလေးသား စစ်စစ်ကြီးပါဗျာ - တစ်ခန်းရပ်ပြဇာတ်
The 63rd Anniversary Mon National Day - UK
Sharing: မြနန္ဒာရေညိုသန်းတယ် ရွှေမန်းတောင်ရိပ်ခို
International Woman Festival in Oxford, UK